> Resource > Hard Drive > Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga ceeriin ah Hard Drive
Waxaan ka ceeriin External Hard Drive soo kaban karto, Data?
Editor Qaaliga ah, maanta markii aan isku dayay in aan furo oo aan drive dibadda u adag, oo anigu ma aan heli karo. Waxaan helay fariin yiri "disk ee H drive, aan formatted. Ma rabtaa in aad waxa ay haatan qaab? "Dhibaatada waxa ay tahay anigu ma aan qaab karo. Waxaan badan files muhiim u ah oo ku saabsan. Waan ogahay drive dibadda adag waa kaxayn cayriin hadda. Ma jiraa wax aan dib u soo ceshano karo xogta ka drive cayriin adag? Thanks.
Drive ceeriin adag sida caadiga ah waxay ka dhigan tahay in ay jirto nidaamka file ma on drive in ay adag tahay. Tani waxay dhacdaa inta badan sababtoo ah baadi nidaamka, howlgal aan habboonayn ama weerar virus. Waxaa formatting inta badan xallin karo dhibaatada. Laakiin formatting drive adag adag qaadan kartaa dhammaan xogta ku saabsan in la wado off. Tani waa sababta aad u baahan tahay barnaamij ceeriin adag soo kabashada xogta drive, kaas oo ay dhammaan xogta soo celin doonaa ka disk ceeriin ah.
Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac waa habka ugu fiican ee aad ka bogsato xogta ka drive ceeriin adag. Waxay kaa caawinaysaa in aad dib u soo ceshano noocyo badan file ka drive adag ceeriin ah, oo ay ku jiraan sawirrada, files audio, videos, waraaqaha iyo in ka badan. Iyadoo interface iyo soo kabashada ammaan ah hababka user-friendly ay, kaliya aad u baahan in lagu xiro drive ceeriin adag la your computer iyo bilowno barnaamij si ay u iskaan.
Waxaad ka heli kartaa version maxkamad barnaamijkan dib u soo ceshano xogta ka drive ceeriin adag hadda ah.
Qabtaan ceeriin ah Hard Drive Data Recovery in 3 Talaabooyinka
Haddaba ee loo farsameeyo soo kabashada la Wondershare Data Recovery u computer Windows. Users Mac fadlan version Mac barnaamijka.
Tallaabada 1 hab kabashada Select inuu ka soo kabsado xogta ka drive ceeriin adag
Saddex hababka soo kabashada ayaa la bixin doonaa idiin ka dib markii socda barnaamijka on your computer, sida aad ka arki kartaa image hoose.
Halkan, si ay u soo ceshano xogta ka drive ceeriin adag, ha la qaado "Recovery File ceeriin ah" sida isku day ah.
Tallaabada 2 baarista drive ceeriin adag tahay in la raadiyo files waxa ku
In tallaabadaas, kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan aad drive ceeriin adag oo guji "Start" si ay u bilaabaan u baar.
Tallaabada 3 Ladnaansho xogta ka drive ceeriin adag
Marka scan ay ka badan tahay, dhammaan faylasha recoverable aad drive ceeriin adag lagu soo bandhigi doonaa suuqa kala barnaamijka.
Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay soo dooratay oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya on your computer.
Fiiro gaar ah: Tan iyo "soo kabashada ceeriin" mode ma muujiyaan aan magacyada file asalka iyo waddooyinkiisa, waa in aad ku si aad u iibsato nooca buuxda inuu ka soo kabsado files helay ama aan.